BBC Somali - Warar - Uganda oo ciidankeeda kala baxaysa Somalia, Congo iyo Afrikada Dhexe
Uganda oo ciidankeeda kala baxaysa Somalia, Congo iyo Afrikada Dhexe
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 3 Novermber, 2012, 03:32 GMT 06:32 SGA
Wasiirka Amniga ee Uganda iyo Raiisul Wasaaraha dalkaasi ayaa sheegey in xukuumaddooda ay dooneyso inay ciidamadeeda kala soo baxdo dhamaan hawlgalada ay ka wadaan dalalka dibedda.
Talaabadani waxay saameyn doontaa oo kale hawlgalka Midowga Africa ee Somalia ee AMISOM, Jamhuriyadda Afrikada Dhexe iyo Jamhuriyadda Dimoqraadiga ee Congo.
Labadan wasiir ayaa sheegey in talaabadan ay jawaab u tahay warbixin Qaramada Midoobay ay diyaarisey, taas oo ku eedeysey Uganda inay taageerto falaagada M23 ee ka dagaalama Bariga J D ee Congo.
Waxay intaa ku dareen in dowladda Uganda warbixintaasi kadib go'aansatey inay ciidamadeeda kala baxdo hawlgalada nabad ilaalinta ee ka socda gobolka.
Laakiin maysan sheegin xiliga laga yaabo in ka bixitaankaasi uu bilowdo ama dhici doono.
Uganda waxay eedeynta ku xusan warbixinta Qaramada Midoobey ku tilmaantey wax micno darro ku dhisan, isla markaan aan sal iyo raad lahayn. Xukuumadda Kampala ayaa ku hanjabeysey inay isaga baxayo hawlgalada nabad ilaalinta gobolka, waayo dadaalkeda naf u huridnimo ee ay sameyneyso lama tixgelin sida uu ku doodey wasiirka amniga Muruli Mukasa .
Hadii Uganda ay ciidamada kala baxdo dalalka Somalia, Jamhuriyadda Afrikada Dhexe iyo Jamhuriyadda Congo, waxay taasi dhalin kartaa dhibaato culus, caqabadna waxay ku noqon kartaa dadaalada la doonayo in nabad looga dhaliyo dalalkaasi.
Dhanka kalena waxaa jira dareen ah in talaabadani ama hanjabaadani ay noqon karto mid la doonayo in lagu hakiyo eedeymaha Qaramada Midoobay ee ku saabsan doorka Uganda ee J D ee Congo.
Waxaa kaloo Uganda ay ka jawaabtey war dhowaanka soo yeerey wasiir ku xigeenka arrimaha dibedda ee Kenya oo sheegey in ciidamo ka badan laba kun laga diley Uganda intii ay dagaalada kula jireen kooxaha Islaamiyiinta ee Somalia.
Afhayeenka ciidamada Uganda Colonel Felix Kulaigye waxaa uu sheegey in Kenya aaney wax shuqul ah ku lahayn inay sheegto tirada ciidamada Uganda ee ku waxyeeloobey dagaalada Somalia.